ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်မည့် ခန်းမှန်ချက်ကြောင့် မြေပြိုမှုများ၊ ရေကြီးရေလျှံမှုများ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်မည့် ခန်းမှန်ချက်ကြောင့် မြေပြိုမှုများ၊ ရေကြီးရေလျှံမှုများ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဂျပန်နိုင်ငံ Atami မြို့တွင် ရွှံ့နွံပြိုကျမှုကြောင့် ပျက်စီးနေသော နေအိမ်များအား ဇူလိုင် ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တိုကျို၊ ဇူလိုင် ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နေရာအတော်များများ၌ မိုးသည်းထန်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်းကြောင့် ဂျပန် မိုးလေဝသအေဂျင်စီ (JMA) က မြေပြိုမှုများနှင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက သတင်းဖော်ပြထားသည်။JMA ၏ အဆိုအရ မိုးမည်းတိမ်တောင်များသည် ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတစ်ခွင် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း၌လည်း မိုးသည်ထန်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ရွှံ့နွံပြိုကျရာမှ လူ ၂၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးခဲ့သော Atami မြို့တွင်လည်း ဇူလိုင် ၈ ရက်၌ မိုးသက်မုန်တိုင်းများ ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းနှင့် ဇူလိုင် ၁၇ ရက်အထိ တိမ်ထူထပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မိုးရွာသွန်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ဒေသများ၌ ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် မိုးရေချိန် စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ မြေပြိုမှု သတိပေးချက်များကိုလည်း ရှီမာနဲ၊ တော့တိုရီ၊ ဟီရိုရှီးမား၊ အိုကာယားမားနှင့် ဟိုဂို စီရင်စုများ၌ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတွင်လည်း ဇူလိုင် ၉ ရက်အထိ မိုးသက်မုန်တိုင်း နှင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ် နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ဒေသအချို့တွင် ဇူလိုင် ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ၂၄ နာရီအတွင်း မိုးရေချိန် ၁၅၀ မီလီမီတာအထက် ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင်မူ မိုးရေချိန် ၁၀၀ မီလီမီတာအထိ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
Heavy rain forecasted across much of Japan, warning of landslides, flooding issued
TOKYO, July 8 (Xinhua) — Japan Meteorological Agency (JMA) Thursday issuedawarning of landslides and flooding as heavy rain is expected across much of Japan, local media reported.
According to the JMA, rain clouds have developed over western Japan and the rain is also getting heavy in eastern Japan.
Atami City, where massive mudslides occurred and left 20 people missing last week, will likely undergo thunderstorms on Thursday, and cloudy or rainy weather through Monday.
Parts of western Japan along the Sea of Japan coast had recorded rainfall on Wednesday. Landslide alerts have been issued for parts of Shimane, Tottori, Hiroshima, Okayama and Hyogo prefectures.
Downpours, accompanied by thunder and lightning, are forecasted in western and eastern Japan through Friday.
Some parts of western Japan can expect up to 150 millimeters of rain overa24-hour period through Friday morning, while central Japan can expect up to 100 millimeters. Enditem
Photo taken on July 4, 2021 shows houses destroyed inamudslide in Atami, Shizuoka prefecture, Japan. (Xinhua/Hua Yi)
ဆွီဒင်နိုင်ငံ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင် လူအများအပြားသေဆုံး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက္ကဆက်ပြည်နယ်၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပေါ် အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေဟု စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြ
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အားကောင်းသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ချဉ်းကပ်၊ တာဝန်ရှိသူများက သတိပေး